यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? जान्नुस – Online Khabar 24
यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? जान्नुस
October 22, 2021 by admin admin
शालिनीले भनिन् कि उनकी आमा, बहिनी र भाइले हरेक पाइलामा उनीमाथि विश्वास राखेका छन्। यति मात्र होइन, उनी भन्छिन्, उनकी हजुरआमाको माया र आशीर्वादले उनलाई यहाँसम्म ल्याएको छ, हजुरआमा सधैं उनीलाई भन्थिन् कि छोरा तिमीले केही देखाउनु पर्छ।शालिनीका काकाले भने कि शालिनी हाल इन्दिरा गान्धी दिल्ली टेक्निकल युनिभर्सिटी फर वुमन बाट इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन ईन्जिनियरिमा आफ्नो अन्तिम बर्ष पछ्याइरहेकी छिन्।
शालिनी झाले भनिन् कि उनलाई अष्ट्रेलियन सफ्टवेयर कम्पनी एटलसियन बाट कलेज बाट क्याम्पस मा प्लेसमेन्ट ड्राइभ को लागी एउटा अफर पनि प्राप्त भएको थियो, त्यो पनि ५१.५ लाख को प्याकेज को लागी। त्यस पछि उनले डाटा भण्डारण कम्पनी वेस्टर्न डिजिटल संग दुई महिना को इंटर्नशिप गरे, जस पछि उनी एक पूर्व नियुक्ति प्रस्ताव पाए।
तर शालिनीले गुगलमा अफ-क्याम्पस प्रयासको लागी आवेदन दिईन् र अन्तर्वार्ता को सात राउन्ड पछि, उनी सफ्टवेयर ईन्जिनियर को पद को लागी चुनिएकी थिइन्, जसमा उनी लाई ६० लाख रुपैयाँ वार्षिक प्याकेज को प्रस्ताव आयो।
शालिनीले भनिन्, अब उनी आफ्नो पढाई पूरा गर्छिन्, त्यस पछि उनी एक सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा गुगलमा सामेल हुनेछन्। पढाई बाहेक, शालिनी क्रिकेट हेर्न पनि मन पराउँछिन्, त्यति मात्र होइन, उनी ब्याडमिन्टन र चेस खेल्न पनि मन पराउँछन्। उनी विश्वास गर्छिन् कि केवल आठ देखि १० घण्टा सम्म अध्ययन गरेर केहि पनि गाह्रो छैन। यो मात्र होइन, उहाँ गीता र रामचरितमानस पढ्नमा धेरै रुचि राख्छिन । साभार गरियको खबर ।
Prevआफ्नो लक्की नम्बर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ जन्म मिति अनुसार लक्की नम्बर थाहा पाउने तरिका
nextअब प्रहरीका हाकिमले तल्लो तहकाहरुलाई ‘तँ’ भन्न नपाउने ! किन होला त ? जान्नुस